रैंयाँलाई दर्शकले अपार माँया दिए फल्स्वोरुप सरकारबाट सम्मान मिलेको छ -निर्देशक ,मेजन पुन मगर
मगर महिलाको गहना रैंयाँलाई विषयवस्तु बनाएर जेठ २ गते पोखराको सभाहलदेखि प्रदर्शनमा आएको मगर विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र ‘रैंयाँ’ र यसैको सेरोफेरोमा रैंयाँ फिल्मको लेखन/निर्देशक मेजन पुनसँग राज्यसत्ताले गरेको कुराकानी ।
‘रैंयाँ’ चलचित्रलाई आम मानिस र आम मगरले कसरी बुझ्ने ?
मगर महिलाको गहनामा आधारित रहेर यसको महत्व र यसको पहिरनले सुन्दरता मात्र नभएर यो गहना मगर समाजमा आत्म रक्षाको कवच पनि हो भन्ने कुरालाई रैयाँ चलचित्रमा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको मुलतः नेपाल भित्रको कथा बोकेको मगर समाज भित्रको कथानक चलचित्र हो । यसमा समाज भित्र भईरहेको घटनाहरुलाई सकभर सरल तरिकाले उजागर गर्न खोजिएको छ । मगरको विषय वस्तु भएको कारण मगरले त मन पराउनु हुने नै छ भने यो हाम्रै वरिपरि घटेको घटनाहरुलाई समेटिएको कारण यसले आम मानिसको मन पनि छुने छ भन्ने लाग्दछ । रैंयाँ चलचित्र पूर्णतः साँस्कृतिक चलचित्र पनि हो । विदेशी भाषाको चलचित्र हेर्छौ तर नेपालभित्र बोलिने भाषामा बनेको चलचित्र चाहिं हामी किन नहेर्ने ? यो आम दर्शक र मगर समाजलाई हेर्नको लागि आग्रह पनि हो ।
मगर विषयवस्तुमा नै आधारित चलचित्र बनाउनुको खास कारण ?
रैयाँमा मगरको विषय मात्र समेटिएको छैन । रैयाँ भित्र नेपालको आम मानिसको कथा पनि बगेको छ । जहाँ सत्य कुरा सत्य हो भनेर जाँचबुझ गर्न पनि माथिल्लो ओहोदाको सिफारिश चाहिन्छ । र राज्यबाट आफ्नो समाजभित्रको परम्परागत गौरवपूर्ण संस्कार, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने कुनै पहल नभए पछि समाजभित्रैबाट आफ्नो गौरवपूर्ण विषयवस्तुमा आधारित रहेर भाषा, संस्कृतिको साथै मनोरञ्जनलाई पनि ध्यानमा राखेर यो चलचित्र निर्माण गरिएको छ । जसले मनोरञ्जनको साथ साथ मगर समाज भित्रको कथा बोकेको छ ।
चलचित्र हेरिसकेपछि दर्शकले कस्तो प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् ?
प्रतिक्रिया राम्रो पाईरहेका छौं । मगर बाहेक अन्य जातिले पनि चलचित्र मन पराउनु भएको छ । हामीलाई भेटेर बधाई दिएका छन् । अझै कसै कसैले त रैंयाँ २ को आशा पनि गरिरहेका छन् । यसर्थ हामीले अलि बढि लगानी गरि एउटा भाषालाई समेटेर चलचित्र निर्माण गर्नु कतै गलत त होइन भन्ने कहिले काहि लाग्ने गर्दथ्यो तर गलत होइछ भन्ने कुरा अहिले दर्शकको उपस्थिति र माया पाउँदा सन्तोक लागिरहेको छ ।
चलचित्रको ‘मेकिङ’को विषयमा कुनै सुझाव दिएका छन् ?
हामीले सिमित श्रोत र साधनले अधिकतम आउटकम निकाल्ने प्रयास गरेको हो । ५०–६० लाख खर्च गरेर बन्ने फिल्म झै प्रविधि प्रयोग गर्न सकेनौं तर सिमित साधन प्रयोग गरि जति गरेका छौं त्यसले मन छुएको छ । स्क्रिप्टमा मेहनत गरेका छौं । वर्कसप राखेर नयाँ कलाकारहरुलाई माझ्ने काम गरेका छौं । यसर्थ प्रविधि भन्दा हामी विषय वस्तुलाई ध्यान दिएर चलचित्र निर्माण गर्ने पहल गरेका हौं । यसर्थ बुझ्नेले स्रराहना दिईरहेका छन् । नबुझ्नेको त के कुरा गर्न सकिन्छ र ?
चलचित्रले आर्थिक रुपमा कत्तिको व्यापार गर्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
अहिले सम्मको प्रदर्शन र दर्शकले यो चलचित्रप्रति देखाउनु भएको उपस्थितिबाट हामी हौसिएका छौं । कतै रैंयाँ २ बन्छ कि क्या हो भन्ने सम्म भएको छ । यसमा मगर समाजमा विगत देखि काम गरिरहेको हाम्रो क्रियाकलापको कारणले पनि हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रो कदमको स्रराहना गर्नु भएको छ— जस्तो लाग्छ । किनकि २० औं वर्ष रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारणमा कार्यरत हर्क आले मगर, सामाजिक संस्थामा काम गरिरहेका तारामाया थापा मगर पनि निर्माताको रुपमा रहेको हुँदा पनि चलचित्रले राम्रै व्यापार गर्छ भन्ने लागिरहेको छ । फेरि हामीले भुकम्प पीडितलाई सम्झेका छौं साथै मगर चलचित्रकर्मी संघलाई पनि नाफाको केही प्रतिशत छुट्टाएका छौं यसको कारणले गर्दा पनि हाम्रो व्यापार राम्रै भईरहेको छ भन्ने लागिरहेको छ ।
विदेशमा पनि चलचित्र देखाउने तयार गर्नुभएको छ ?
कुरा त भईरहेको छ । तर विदेशको भन्दा अहिले हामीलाई स्वदेशका विभिन्न ठाउँहरुबाट प्रदर्शनको लागि अनुरोध आईरहेको छ । स्वदेशमा प्राप्त भएको यो माया हाम्रो लागि ठूलो हो यसर्थ हाम्रो योजना असार–साउन पोखरा वरिपरिको ठाउँहरुमा प्रदर्शन गर्ने र साउन पछाडि अलि टाढा प्रदर्शन गर्ने राखेका छौं । यसको लागि पुर्वको इटहरी देखि पश्चिमको सुर्खेत सम्मबाट प्रदर्शनको लागि कुरा भईरहेको छ । र, यसको प्रभाव एक दिन विदेशमा पनि पर्ने छ भन्ने लागेको छ ।
रैंयाँले चलचित्र विकास बोर्ड अन्तरगत आदिवासी जनजाति प्रवद्र्धन समितिद्वारा प्रोत्साहन सम्मान पत्र प्राप्त गर्दैछ कस्तो लागिरहेको छ ?
आदिवासी जनजाति प्रवद्र्धन समितिले नयाँ कामको शुरुवात गरेको छ । राज्यबाट आदिवासी जनजातिको कामलाई प्रोत्साहन दिने यो कामले निरन्तरता पाईरहोस् । साथै यसले जातीय चलचित्र र जातीय चलचित्रकर्मी संघको महत्व पनि बढ्ने छ भन्ने लागिरहेको छ ।
साथै जातीय चलचित्रकर्मी संघको तर्फबाट सिफारिश हुने हुँदा चलचित्रले जातीय कुरा बोकेको छ भन्ने कुरामा सबै ढुक्क भए हुने आधार तयार हुने निश्चित भएको छ । र, यो सम्मान प्राप्त गर्दा रैंयाँ माथि अझ भार थपिएको महसुस चाहिं भएको छ । र, रैंयाँले पहिलो पटक थाप्दैछ भने अब बन्ने मगर चलचित्र कम्तीमा रैंयाँ भन्दा राम्रो र स्तरीय बनाउनु पर्ने जिम्मेवार पनि मगर चलचित्रकर्मीहरु माथि थपिएको छ । साथै रैयाँको स्क्रिप्ट लेखनको बेलामा धेरै पटक कोर्ने/मेट्ने काम भएको छ । लेखनमा मेहनत भएको कारण चलचित्र राम्रै बन्यो कि भन्ने लागेको छ ।
लेखनमा मलाई राज थापा मगर, केशव थापा मगरले साथ दिनु भएको थियो । अहिले वहाँहरुसँग बसेको गफ गरेको कोरेको मेटेको काम राम्रो भयो भन्ने लागेको हो । यसर्थ वहाँहरुलाई पनि धन्यवाद । अनि हर्क आले मगरज्यूको कथाको जिस्ट राम्रो थियो । यसर्थ पनि चलचित्रले यो सम्मान प्राप्त गरेको छ जस्तो लागेको छ । अनि चलचित्र बनाएर मात्र पनि भएन यो चलचित्र प्रदर्शनको लागि तारामाया थापा मगर, हर्क आले मगरको सम्पर्क सुत्रले राम्रै काम गरेको छ । र, प्रदर्शनको बेलामा दर्शकको ओइरोले गर्दा यो यहाँ सम्म आएको चाहिं पक्कै हो ।
साथै प्राविधिक रुपमा हामीले अन्य मगर चलचित्र भन्दा अलि बढी लगानी गरेको चाहिं पक्कै हो । र, प्रविधिको लागि चाँजो पाँजो मिलाउने एम पुनलाई पनि सम्झन चाहन्छु । एकमुष्ट भन्नु पर्दा कलाकार, प्रविधि, कथा, समय सबैको मिश्रण राम्रो भएको छ । साथै यसलाई मगर महिला पत्रकार समुहबाट राम्रो सहयोग प्राप्त भएको छ । यसको लागि धन्यवाद सबैलाई ।
Last Updated on Monday, 13 July 2015 15:02
पुरानो पार्टीलाई क्याप्चर गर्नेछौँ- अध्यक्ष थापा
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको समानुपातिक सभासद रहेकै बेला एकाएक पार्टीबाट राजीनामा दिएर राष्र्टिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल नामक नयाँ पार्टीको गठन गरेका शिबलाल थापा अहिले नयाँ पार्टीलाई मजबुद बनाउने ध्याउन्नमा छन् । थापा अध्यक्ष राष्र्टिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपालले केही दिन अघि निर्बाचन आयोगबाट नयाँ पार्टीको रुपमा अधिकारीक मान्यता पनि पाएको छ । प्रस्तुत छ, शिबलाल थापासँग उनको पार्टी र नयाँ राजनीतिक उतारचढावबारे राज्यसत्ता डट कमका निर्देशक हुम बहादुर थापा (पचभैया) ले गरेको कुराकानी :
किन नयाँ पार्टी खोल्नु भो ?
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई सामूहिक नेत्तृत्वमा लैजाने काम यो पार्टीबाट अब हुँदैन । जनमुक्तिको चौथो महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट पनि पूरा भएन । अहिलेसम्म व्यवहारमा पनि देखिएन । जमनुक्तिका अध्यक्ष एमएस थापाको उमेर पनि बुढो भयो । स्वास्थ्यले पनि उहाँलाई साथ दिएको छैन । एउटा महाधिवेशन राखेर नेत्तृत्व बदलेर जाऔं । पार्टीमा उहाँलाई अभिावकको ठाउँमा राखेर जाऔं भन्ने सुझाव दिँदै आयौं । उहाँले मान्नु भएन । मलाई उल्टै मेरो नेत्तृत्व खोस्न खोज्यो । यो सबै बिगोरेको उपाध्यक्ष शिबलाल थापाले हो भन्न थाल्नुभयो । शिवलाल सभासद भएपछि धेरै गल्ती गरेको छ । त्यसलाई अब सभासदबाटै हटाउनुपर्छ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने खेल खेल्नुभयो । त्यसपश्चात नै म नयाँ पार्टी खोल्ने अवस्थामा पुगेको हुँ ।
तपाईहरुलाई पार्टीबाट निकाल्ने योजना बनेपछि आफै निक्लिएको भन्ने छ नि ?
त्यो त यस्तो हो । अध्यक्ष एमएस थापाले अग्रगमन छलाङ मार्ने नदेखिएकोले धेरै पटक अउहाँलाई नेत्तृत्व हस्तान्तरण गर्न सुझाव दियौं । उहाँले मान्नु भएन । अर्को कुरा हामीलाई निकाल्ने भन्दैमा त्यो जनमुक्ति पार्टी परित्याग गरेको पनि होइन र पहिलो चरणबाट आउँदा उहाँले कि पार्टीलाई दुई सभासदले ५०/५० लाख दिनुपयो । दुई सभासदले एक करोड दिनुपर्छ हैन भने पार्टी छोड भनेपछि बाध्रत्मक किसिमको परिस्थिती उहाँले सिर्जना गर्नुभयो । अनि यतातिर लागियो ।
जनमुक्तिबाट संबिधान सभाको सभासद हुनुहुन्थ्यो पार्टी छोडेपछि त त्यो पद पनि गयो होला नि ?
संविधान सभाले हामीलाई छोड भनेर छोड्ने र बस बनेर बस्ने हैन । कुनै पार्टीले त सभासद बनिरहनुपर्छ त बन्न पाउँदैन भनेर पनि हुँदैन । हामीलाई नेपाली जनताले संविधान निर्माण गर्नको लागि ४ वर्षसम्मको जिम्मेवारी दिएर पठायो । त्यही जिम्मेवारीको आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले पहिलो चरणमा हामीले बाध्य भएर जनमुक्ति पर्टी परित्याग गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया बढायौं । जनमुक्तिले निर्वाचन आयोगमा जुन निवेदन दर्ता गर्नुभयो उहाँ असफल हुनु भएको छ । हाम्रो पक्षमा निर्वाचन आयोग र संविधान सभाले सभासद रहिरहने भन्ने निर्णय गरेकाले हामी सभासद नै छौं ।
सभासद जनमुक्ति पार्टीबाट बन्ने, त्यही पार्टीमा लामो समय काम गर्नुभयो । यति धेरै पहिचान र इतिहास बोकेको पार्टी किन छोड्नु भा त ?
म अहिले पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको संस्थापक सदस्य हुँ । र अध्यक्ष एम.एस.थापासँगै झन्डै २०-२५ बर्ष काम गर्यौँ । त्यतिबेला हामीले हरेक चरणमा सहयोग गर्यौँ । अहीले आएर उहाँको जुन क्रियाकलाप देख्यौँ, भोग्यौँ त्यसले पार्टीलाई अगाडी लाँदैन । गलत निर्देशनबाट पार्टीलाई निस्क्रिय गराएर राख्ने अग्रगमनमा लैजान नचाहने सँधै यथास्थितितिर राख्ने जस्तो क्रियाकलाप देखियो । २०६७ साल फागुनमा हाम्रो चौथो महाधीवेशन भयो । महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ नेतृत्व दिने म्यान्डेट दिएको थियो । तर अध्यक्ष ज्युको एकल नेतृत्व कहील्यै हटेन । सँधै हैकमवाद लाद्ने प्रयास भयो । हामीले २-३ बर्ष अगाडी देखी सम्झाउँदै आयौँ । बैठकमा कुरा राख्यौँ । तर अध्यक्षले गलत ढंगले सोच्नुभयो । चौथो अधिवेशनबाट निर्वाचित म उपाध्यक्षलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्ने किसिमको क्रियाकलाप गर्नुभयो । त्यसो गर्नुको कारण के थियो भने पार्टीको पन्ध्रौँ बैठकमा दुई जना सभासद म र सिमा कुमारी वि.क.लाई कुनै जानकारी नगराई सबैलाई वाईकट गरेर राख्नुभयो । त्यसपछि अध्यक्षले हामीलाई सभासदबाट हट अन्यथा पार्टीबाट कारबाही गर्छु । कारबाही गर्ने अधिकार पार्टीबाट पाएको छु भन्दै जानु भो । सभासदबाट फिर्ता बोलाए पनि जुन पार्टीले सभासद बनायो । त्यसले बोलाउँछ भने आउँछु भनेकै थियौं । तर, उहाँले त जनमुक्तिबाटै निकाल्ने प्रपञ्च गर्नुभो । त्यसपछि बाध्य भएर हामीले नयाँ पार्टी खोल्ने अवस्थामा पुग्यौं ।
अध्यक्ष बन्ने नै रहर थ्यो भने त पुरानै पार्टी भित्र छलफल चलाएनि हुने हो नि ?
हुन्थ्यो, मलाई त्यस्तो कुनै पदहरुको लोभ त छैन । अब पुरानै पार्टीमा बसेनि पाईन्थ्यो होला । नयाँ दलबाट पनि पाईन्थ्यो । मलाई अध्यक्षको रहर होइन । सभासद पनि चाँहिदैन । तर, पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भनेर म सभासद भएको हो । तर पार्टीमा पहिलेदेखी नै अन्तरसंघर्ष हुँदै आएको हो । दुई तीन वर्षदेखी मैले पार्टीमा बढी अन्तर संघर्ष गर्दै आएँ । धेरै जना अध्यक्षको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट थिए । अध्यक्षले पार्टीमा सँधै एक नेत्तृत्व गर्ने गर्नुभयो । उहाँले अरु सदस्यको कुरा सुन्ने प्रयास गर्नु भएन । जति सुझाव सल्लाह दिए पनि मान्नु भएन । जनमुक्तिको अध्यक्ष एमएस थापाको नेतृत्व ठिक छैन भनेर पार्टीका धेरै सदस्यले भनेकै हुन् । उहाँले एकलौटी ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्न थाल्नुभो । त्यहाँ बसेर हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन हुने अवस्था देखिन । उहाँ कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष पदमा बसिरहने योजनामा हुनुहुन्छ । जति बहस चलाए पनि व्यर्थ हुनेदेखेपछि म अहिलेको नयाँ अवस्थामा आएको हो । अर्को कुरा पूरानो पार्टीबाट मात्र होइन हामीले अहिले पनि नयाँ पार्टीको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न निवेदन दियौं । यसो गर्दा अध्यक्षज्यू केही बदलिनुहोला भनेको उहाँको हैकम जारी रह्यो । उल्टै हामीलाई नै साधारण सदस्य नरहने गरि पार्टीबाट निस्कासन गर्ने मुद्दा मामिला, झैझगडा गर्ने भएकाले बरु दल दर्ता गरौँ भनेर लागेपछी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) गठन गर्यौँ । निर्वाचन आयोगले प्रमाण पत्र दिएको साढे तीन महीना भयो ।
उसो भए पुरानो पार्टीमा बसेर उपाध्यक्षभन्दा माथि जान सकिदैन भनेर हो नयाँ पार्टीको आबश्यकता भएको ?
त्यो त यसो हो, कुनै पनि संघसंस्था, दलमा जबसम्म विचार र मुद्दा मिल्छ तबसम्म एकठाउँमा बस्ने हो । जब विचार र मुद्दामा बिमति देखा पर्छ छुटीनु भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन । एउटै बाउआमाका छोराछोरी त छुटिन्छन् भने यो त राजनितिक मुद्दा हो ।
नेपाली उखान छ नि जुन थालमा खायो उही थालमा थुक्यो भन्ने । यो उखान त तपाईलाई पनि लाग्छ नि हैन र ?
जुन थालमा खायो त्यो थालमा थुकेको भन्दा पनि जुन नेतृत्वले दिनसक्ने विचार हो त्यो दिन नसकेपछी २५ बर्षको इतिहासमा केही परीवर्तन नभएपछी हामीले बाध्यात्मक परीस्थितिमा यो बाटो समात्नुप-यो ।
पुरानो पार्टी छोडेर ठुला पार्टीमा (काँग्रेस, एमाले, एमाओबादी) जानु भएको भए त राम्रै पद दिन्थे होला नि ? तपाईलाई अध्यक्ष नै किन चाहियो र ?
हैन, यो हाम्रो अध्यक्ष पद भन्दा महत्वपुर्ण चिज मुद्दा हो । हामीले हिँजो देखी आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, महीला, मुस्लिम, सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा वकालत गर्यौँ । यो मुद्दा अरुले बोक्न सक्दैन । हामी पनि यो मुद्दा छोड्न सक्दैनौँ । हामीलाई ठुला राजनितिक दलले बोलाएकै हो, यत्रो बर्षसम्म यही मुद्दामा लडयौँ, हामीले छोड्न चाहेनौँ । आफ्नै मुद्दा बोकेर अगाडी बढ्यौँ । अहीले साना राजनितिक दलहरु जसको मुद्दा मिल्छ सबै एउटै दलमा बसेर कार्यगत एकता गरौँ । संगसँगै मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव संवाद समिति र संविधान सभामा प्रस्ताव राख्यौँ । अहीले त्यसलाई पास गर्ने विषयमा अगाडी बढेका छौँ ।
नयाँ संबिधानमा जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दिनरात खट्नुपर्नेमा तपाई त नयाँ पार्टीको खेलमा पो लाग्नु भारैछ ?
हैन, हाम्रो पार्टीको सभासदको हैसियतले संविधानसभामा खेल्नुपर्ने भुमिकामा केही कमी आएको छैन । २०६४ सालमा एमएस थापा निर्वाचित भएर सभासदमा जानुभयो । त्यो भन्दा १० गुणा बढी भुमिका खेलिरहेका छौँ । संविधानसभामा ७५-८० पटक आफ्ना भनाई राखिसकेका छौँ । आफ्नो मुद्दामा लड्दै आएका छौँ ।
नयाँ पार्टीको आवश्यकता खासमा किन हो ? ब्यक्तिगत रिसिबिमा हो कि, पार्टीको निति र सिद्धन्त नै गलत भएर हो ?
पार्टी र राजनितिक सिद्धान्त प्रति होईन, मेरो फरक विचार भनेको नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति हो । हिजो राष्ट्रिय पार्टीबाट विभाजीत हुँदै जाने मध्ये हामी जनमुक्ति १६ औँ नम्बरमा पर्छ । त्यो भन्दा अगाडी १५ चिरा भईसकेको छ । त्यो सबै नेतृत्वको कार्यशैली, विचारबाट असन्तुष्ट भएर हो ।
नयाँ पार्टी खोल्न त एउटा बिचार हुनुपर्ने, सिद्धान्त र भाबी यो योजना हुनुपर्ने, तपाईले त कुनै ब्यक्तिको रिसिबिको आधारमा नयाँ पार्टी खोल्नु भो भनेर सबैले भन्छन् नि ?
मैले अघी नै भनेँ, यो कुनै व्यक्तिगत असन्तुष्टीले भन्दा पनि नेतृत्वमा बसेपछी कार्यशैली सुधारीनुपर्छ । अरु सदस्यको कुरा सुन्नुपर्छ । यति भन्दा भन्दै तानाशाही ढंगले विधान विपरीत पार्टीको केन्द्रिय समितिले बैठकमा निर्णय गरेर अध्यक्षलाई सबै अधिकार दिएको हो । तैपनि उहाँ सुध्रनु भएन । २५ बर्षसम्म एउटा पार्टीको नेतृत्व गर्दा पार्टीलाई सत्ताको नजिक पुर्याउनुपर्नेमा सँधै कोठाभित्र राजनिति गरेर कोठामै समय खेर फाले । त्यसकारण नयाँ फड्को मार्न हामीले नयाँ शक्तिको निर्माण गरेका हौँ ।
आगामी दिनमा तपाइ र तपाईको पार्टीको योजना र उदेश्य के के हुन् त ?
१५-१६ चिरा भएको पार्टीलाई जोड्दै जानेछौँ । जिल्ला समिति गठन, विस्तारीत राष्ट्रिय भेला गरेर वैकल्पिक शक्तिका रुपमा अगाडी बढ्ने हाम्रो लक्ष्य छ । म अध्यक्ष रहेको पार्टी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक)को केन्द्रिय समितिले भावि कार्ययोजना, रणनिति, कार्यदिशा सबै तय गर्नेछ । भुकम्पले मुलुक रोईरहेको बेला अब हामीले पनि उनीहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । साथसाथै नयाँ संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीको महत्वपुर्ण भुमिका रहनेछ । पार्टीलाई शक्तिमा पुर्याउनका लागी धेरै किसिमका खेलहरु खेल्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विचार सिद्धान्त मिल्नेहरुसँग एकीकरण गर्ने, नसके मोर्चा गठबन्धन गर्ने, त्यो नभए कार्यगत एकता गरेर सडक र सदनमा आन्दोलनलाई सही रुपमा लैजाने छौँ ।
पुरानो पार्टीका अन्य साथीहरु सँग पनि छलफल र कुराकानी भएको होला नि ? के भन्छन् , फेरी आउ भन्छन् कि हामीपनि तपाई संगै आउछौं भन्छन् त ?
पुराना साथीहरु आउने क्रम जारी छ, कसैले आउँछु भनेका छन् । हामी जस्तो पायो त्यस्तै साथीहरुलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने छैनौँ । त्यो पार्टीमा असल साथीहरु जो, जसले लामो समयदेखी काम गरेका छन् उनीहरुलाई हामी छानिछानि ल्याउँदै छौँ । सत्प्रतिसत पुर्याएपछी हामीले पुरानो पार्टीलाई क्याप्चर गर्नेछौँ, यो हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
तपाईलाई अहिलेकै अवस्थामा राष्ट«िय जनमुक्ति पार्टीले (पुरानो पार्टीले ) अध्यक्ष पद दियो भने तपाईले गठन गरेको लोकतान्त्रिक नेपाल पार्टी के हुन्छ ?
बहुमत भयो भने हामीले पुरानो पार्टीलाई क्याप्चर गर्छौँ । नयाँ पार्टी छोड्दिन्छौँ । हाम्रो पार्टीको नाम भन्दा, घोषणा पत्र, विधान लगायत दस्तावेज पुरानै रहन्छन् । चुनाव चिन्ह त्यही आकारमा बनाउछौँ ।
पुरानो पार्टीका सार्थीहरु तपाईसँग आएर बहुमत भयो भने के हुन्छ ?
हामीसँग आउन चाहाने राम्रो साथीले एक्लाएक्लै हामी आउँदैनौँ, ५१ प्रतिसन पुर्याउने कसरत गर्छौँ भनेको हुनाले उहाँहरु त्यहीँ भित्र बसेर संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ । अब ५१ प्रतिसन पुर्याउने स्थितिमा पुग्छौँ । यदि ५१ प्रतिशत पुगेमा राष्ट्रिय जनमुक्ति (लोकतान्त्रिक) पार्टी नेपाल स्वतः खारेज हुन्छ र पूरानै पार्टीको झन्डा, चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो लगायत पार्टीको सम्पूर्ण बागडोर म अध्यक्ष रहेको पार्टीले सम्हाल्नेछ ।
नयाँ पार्टीका तर्फबाट संविधान लेखनमा कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ त ?
सविधान लेख्नमा अगाडी बढी राखेका छांै । हिजो मात्रै संबैधानिक राजनितीक सदभाव तथा सहमती समितीबाट एउटा सहमती प्रतिवेदन तयार पारेर सभामा पठएका छौ । सविधान सभामा सबै राजनैतिका दलले आफनो धारणहरु राख्ने मौका पाउँछ । मैले पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टि लोकत्रान्कि नेपालको तर्फबाट आफनो बिचार राखेको छु । हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय समितीको तर्फबाट संघियता र प्रदेशको सन्दर्भमा आफ्नो फरक मत दर्ज गरेको छु ।
संविधान निर्माण र संघिय प्रदेशबारे पछिल्लो समय आएको १६ बुँदे प्रतिवेदलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
चार राजनैतिक दलले १६ बुँदे प्रतिवेदन संवाद समितिमा पेश ग¥यो । त्यसमा पहिचानको ५ र सामथ्र्यको आधारमा ४ प्रदेश बनाउने भन्ने छ । हाम्रो पार्टिको धारणे हिजो देखिनै त्यही हो यो आधार त्यो ठिक छ । पहिलो संविधान सभाबाट नै त्यसलाई पास गरि सहमती कायम गरेर ग्रहण गरेको छँ भनि सकेका छौं । तर त्यसमा फरक के भन्दा खेरि ८ प्रदेश हुनुहुँदैन १० प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टिको धारण छ । पहिचानको सन्दर्भमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई दिनेभनेर १६ बुँदे प्रतिवेदमा ४ दलले प्रस्तुत गरेका छन् । नामकरण गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई होइन संविधान सभाले नै त्यसको नामकरण गर्र्र्नुपदर्छ भन्ने हाम्रो धारण छ । भुगोल, इतिहास, भाषा, जाति, सँस्कृतिको आधारमा प्रदेशको नामहरु भन्नुपर्दा फेरी लिम्बुवान खम्बुवान, तामासालिङ ,नेवार, मगरात ,तम्बुवान, थारुवान, शेर्पा, खसान र जडान गरेर १० वटा प्रदेश हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारण हो । सीमाङ्कनको जिम्माबारे पनि हाम्रो फरका मत छ । आयोग बनाएर ६ महिनाको समय सिमा तोक्ने र त्यहि समयमा आयोगले विज्ञ समितिले ६ महीना भित्रमा टुडगो लगाउने कुरा गलत छ । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनेर हामी आउने, फेरि बिज्ञहरुलाई नै बोलाएर संविधान निर्माण गर्ने सिमाङकन ,नामाङकन सारा जिम्मा दिने हो भने, त्यो दोस्रो संविधानसभाबाट निर्वाचित भएर आएको ६०१ जनाको त कुनै औचित्य रहेन । त्यसो भएकाले सिमाङ्कन र प्रदेशको नाम पनि संविधानसभाबाटै टुङ्गाने लगाउनुपर्छ । यो फरक मत हामीले संविधान सभामा दर्ता गरिसकेका छौं ।
तपाइहरु संविधान सभामा हुनुहुन्छ, संविधान बाहिर पनि दलहरु छन् । १६ बुँदापछि संविधान बन्ने संकेत देखिएको छ । कत्तिको संभावना देख्नुहुन्छ ?
हिजो पनि संवाद समितिमा हाम्रो भनाई संविधान सभा भित्र रहेका दलहरुले मात्र बनाएको संविधान सबैलाई मान्य हुँदैन । ठूलै शक्ति संविधानसभा बाहिर पनि छन् । त्यसकारण उनीहरुलाई पनि भेटेर सम्बाद, छलफल बहस गरेर विचारधारा पनि समेट्नु पर्छ । उनीहरुलाई पन्छाएर संविधान सभा जबरजस्ती ढंगले बनाउनु हुँदैन । त्यो संविधान टिकाउ हुँदैन । त्यसैले नेकपामा माओवादी लगायत राजनैतिक दलहरु जो संविधान सभाभन्दा बाहिर छ । उनीहरुसँग सहमति, छलफल गरि राय लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं ।
तस्वीर : मिनबहादुर थापा
Last Updated on Wednesday, 17 June 2015 04:06
मगरको हकहिटका लागि खोलिएका मगर संघ संस्थाहरु मगरहरुको चौतर्फी बिकासको निम्ती उपयोग हुनु पर्दछ ।
दुतबहादुर पुन,हाल मगर संघ युकेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ , उहाको परिचय यतिमा मात्र सीमित छैन ।पूर्व गोर्खा सैनिक , समाजसेवी, पत्रकार, कवि, कथाकार, गीतकार आदी उहाको थप चिनारी हुन ।उनै बहुप्रतिभावान व्यक्तित्वो दुत पुन सँग मगर संघ युकेका वर्तमान गतिविधिका बारेमा गरिएको छोटो संवाद ।
Last Updated on Friday, 12 June 2015 21:54
लोक दोहोरी गीतले नै मलाई चिनायो - मुना थापा मगर
गोर्खा जिल्लाको मनकामना जन्मिएकी मुना थापा मगर लोक दोहोरी क्षेत्रको प्रयायवाची नाम हो । २०६० सालमा ”केबलकारमा गेट” बोलको गीतवाट सांगेतिक यात्रा थालेकी मगरले अहिलेसम्म २००० हजारको हाराहारी गीतमा आफ्नो सुमधुर स्वर भरिसकेकी छिन । ”चिसो चिसो हावा सरर”, ”तिते करेली” जस्ता लगायतका दर्जनौ गीतहरु पस्कि सकेकी मगर अहिले देश, विदेशमा कन्सर्टमा ब्यस्त हुने गायिका मध्येकी एक हुन् । अहिलेसम्म हंगकंग, युके, बेल्जियम, पोर्तुगत, दुबई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, कतार, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत देशहरुमा पुगेर आफ्नो सुरिलो भाका मगरले पस्कि सकेकी छिन । पछिल्लो समयमा लोक दोहोरी क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ र लोक दोहोरी गीतको नाममा छाडा गीतहरु बजारमा आएको गुनासो सुनिने गरेको छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर कोरियाबाट निश्चल काउचाले मगरसंग गरेको कुराकानीः
गत बैशाख १२ मा प्रलयकारी भुकम्प गयो । त्यसपछि पिडितहरुसँग दुःख साट्न गाऊगाऊ पुगे र अझै पनि अस्थाई बासस्थानको लागि जुट्दैछु साथै आफ्नो ज़िन्दगी पनि गुजारा गर्नुपर्यो त्यसको लागि गीत गाउने र रेकर्डिङमा पनि समय दिने गरेकी छु । अचेल यिनै काममा ब्यस्त छु ।
नेपाली संगीत बजार समग्रमा अहिले राम्रै छ । भुकम्प पछि अलि सुस्ताए पनि अहिले दिन प्रतिदिन सुध्रिदै गईरहेको छ ।
अचेल ठेट लोक भाका सुन्न पाइदैन भन्ने सुनिन्छ नी ?
सुन्नै पाईदैन भन्ने त होईन समय अनुसार दर्शक तथा स्रोताको माग अनुसार अलिकति प्रस्तुती र मौलिकतामा फरक त पक्कै आएको छ ।
गीत रेकर्डिङमा र स्टेज कार्यक्रमहरुमै सम्पुर्ण समय दिनु पर्ने भएकोले गाउने अलवा अरु खासै केही काममा समय दिन भ्याएकी छैन ।
गायनमा लाग्ने प्रेरणा कहाँवाट पाउनु भो ?
लोकगीतको उर्भरभूमी गण्डकी अञ्चलमा जन्मिएकी मान्छे म सानै देखि लोकगीत प्रति रुचि थियो । सानै देखि लोकगीत सुन्ने र गुनगुनाउने मान्छे म अग्रज कलाकारहरुले गीत गाएको देख्दा त्यस्तै कलाकार बन्ने सोच आउथ्यो । आमा, बाबा लगायत घर परिवार र गाउकै गायक भेनाले पनि धेरै सपोर्ट गर्नु भयो । अहिले म सबै सामु मुना थापा मगर बनेर चिनिन सफल छु ।
पछिल्लो समय लोक दोहोरीको नाममा छाडा गीत बढ़ी आए भने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नी ?
एक दुई गीत त्यस्तो पनि आएको मैले पनि महसुस गरेकी छु । यसमा सबै कलाकार र सर्जकको मात्र दोष छैन । अहिले बजारमा त्यस्तै गीतलाई बढि प्राथमिकता दिईन्छ । मेरै कुरा गरौ मैले स्टेजमा चिसो चिसो हावा सरर गाउदा निदाउनु हुने दर्शकहरु त्यस्तो खालको गीत गाउदा उफ्रेर स्टेज नै भाच्छन । अब त्यस्तो गीतलाई छाडा भन्ने कि दर्शकको माग ?
अब त घरजम गर्ने बेला भएन र ?
बेला त भयो तर घरजमको कुरा आफ्नो हातमा हुन्न जस्तो लाग्यो । त्यसैले यसको लागि लगननै कुर्नु पर्ला जस्तो छ ।
संगीतमा लागेर नै लोक गायिका मुना थापा मगर भनेर सम्पुर्ण लोक दोहोरी प्रेमी नेपालीहरु सामु चिनिन पाएकी छु । यो भन्दा ठुलो खुशीको कुरा अरु के हुन् सक्छर ।
पछिल्लो समयमा लोक दोहोरीको अवस्था सन्तोषजनक छैन भनिन्छ नी ?
समग्रमा भन्नु पर्दा लोकदोहोरीको अवस्था सन्तोषजनक नैं छ । पछिल्लो समयमा एल्वम बिक्रीमा कमि आएको चाहि पक्कै हो ।
गायनमा आउन चाहने नयाँ पिढीलाइ के भन्नु हुन्छ ?
नयाँ पिढीलाई सकेसम्म गीत, संगीत सम्बन्धी बुझेर र सिकेर आउन आग्रह गर्दछु ताकि पछि यसै क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न सकियोस ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ की ?
मेरो स्वरलाई मन पराई मलाई यति धेरै माया गर्नु हुने हजुरहरु सम्पुर्ण दर्शक तथा स्रोताहरु प्रति सदा आभारी रहने छु । साथै धेरै धेरै धन्यबाद दिन पनि चाहन्छु । आगामी दिनहरुमा पनि मेरो सृजना र म प्रति यस्तै मायाको अपेक्षा गर्दछु ।
Last Updated on Sunday, 14 June 2015 22:23
संगीत बिनाको जीवन कल्पना गर्न सकिदैन : गायीका कला राई
कला राईको पछिल्लो एल्वम 'लुक्स' अहिले चर्चामा छ ।
उक्त एल्वममा समाबेश गरिएको 'संगिनीलाई सुनाऊ कि हाल यो मनको, आफैं हेरी बसूँ कि बेहाल यो मनको' बोलको गीत अहिले एफ.एम , टि.भी र युटुवमा चर्चा बटुलिरहेको छ । यस अघि नै ‘पान्धारे चौकी, मायाँ पो नलाई वा मरिन्छ कि’ बोलको गीतले कलालाई नेपाली संगीत क्षेत्रमा परिचान दिईसकेको छ । रेडियो नेपालले २०५७ सालमा आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी लोकगीत प्रतियोगितामा प्रथम हुँदै गायन यात्रा थालेकी कलाको यस अघि नै 'अफर' र 'कला ' नामक एल्वम बजारमा आईसकेको छ ।
कलाको तेस्रो एल्वम लुक्समा लोकपप, आधुनिक र युगल गीत समेटिएको छ । जसमा अशोक राई, डक्टर किरात, सुरेश अधिकारी, सुनील गिरी, सुवास सर्जन र राजु एन राईले संगीत रहेको छ भने भूपाल राई, भानेन्द्र लिम्बू, मुकेश राई, आशुतोष राई, मुकेश राई र विष्णु श्रापितका साथै कलाकै शब्द रचना रहेका छन । नेपाली गीत , संगीतको वर्तमान स्थित र नेपाली संगीत बजारको सेरोफेरोमा रहेर राज्यसत्ता संवाददाता निश्चल काउचाले राईसंग गरेको कुराकानीको संपादित अंस:
तपाईंको 'लुक्स' एल्वम भर्खरै बजारमा आएको छ । यसमा कस्ता खालका गीतहरू छन ?
लुक्स एल्वममा सबै खालका गीतहरु समावेश गरेकी छु । पप , सेन्टीमेन्टल , फास्ट ट्रयाक सबै फ्लेवरका गीतहरु छन् ।
स्रोता तथा दर्शकको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
मैले केही वर्षको अन्तरालमा एल्वम बजार ल्याए पनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाएकी छु । मिडियाले पनि राम्रो सपोर्ट गरि रहनु भएको छ ।
नेपाली संगीतको स्थिति कस्तो छ ?
पहिलेको तुलनामा नेपाली संगीतको क्षेत्र निकै फराकिलो हुदै आएको छ । हाल सुगम संगीत केही पछि परेको हो की जस्तो भान पनि हुन्छ किनकी अहिले फास्ट ट्रयाकका गीतहरु बदि आईरहेका छन् र मार्केट पनि पाइरहेको स्थति हो । जेहोस राम्रो सबै खालको गीतहरु बजारमा आईरहेका छन् । पहिलेको तुलनामा एल्वम बिक्री ओरालो लागेको पक्कै हो । कन्सर्टतिर जान सके कमाई राम्रै छ ।
देश , बिदेशबाट कन्सर्टको अफर आईराखेको होलानी ?
हजुर आईराखेको छ । विभिन्न् ठाउमा गएर आफ्नो प्रस्तुति पस्कि रहेकी छु ।
संगीतको बाहेक के गर्नु हुन्छ ?
अहिले म टोटल्ली गीत संगीतको क्षेत्रमा समर्पित छु । त्यस बाहेक गृहणी पनि हु ।
तपाईंलाई मन पर्ने गायिकाको नाम लिनु पर्दा ?
सबैको भ्वाईस आफ्नो - आफ्नो ठाउँमा छ । अरुणा लामाको आफ्नै ठाउँमा छ । तारा थापाको आफ्नै ठाउँमा भ्वाइस छ । शान्ति ठटालको आफ्नै ठाउँ मा यसर्थ मलाई सबै गायिकाकाहरुको स्वर मन पर्छ
नेपाली संगीत बजार त पैसावाल , नातावाद र कृपावादको हालिमुहाली चल्छ भनिन्छ नी?
यो परिपाटी संगीत क्षेत्रमा मात्र होईन हरेक क्षेत्रमा लागु हुन्छ । संगीत बिनाको जिन्दगी कस्तो हुन्थ्यो होला ?
संगीत बिनाको जीवन कल्पना गर्न सकिदैन । गीत , संगीत भनेको सुख दु:खमा साथ् दिने साथी हो ।
भावी योजनाहरु के - के छन् ?
अब चाँडै नै मेरो पुराना र नयाँ एल्वमको हिट गीतहरुमा एक , दुई वटा नयाँ गीत समेटेर भिसिडी निकाल्दै छु ।
तपाईको फ्यानहरूलाई केही भन्न चाहनु हुन्छकी ?
हजुरहरुकै माया र सपोर्टले गर्दा नै आज म तेस्रो एल्वमसम्म आईपुगेकी छु । आउँदा दिनहरुमा पनि यसरी नै हजुरहरुको मायाँ र सपोर्ट पाईरहने छु विश्वासका साथ थ्याङ्क्यु सो मच भन्न चाहन्छु ।
Last Updated on Monday, 01 June 2015 09:38
रैंयाँ चलचित्र (शुरुवात देखि सुटिङ समापनसम्म)
रैंयाँ मगर महिलाको सुन्दरता र गहना हो- नायीका मगर
दाइजोको पैसाले अशक्त बालबच्चालाई सबल बनाउदै छु : सविता उप्रेती
संगीतमा संघर्ष गर्न सके नाम र दाम दुवै छ - गायिका तायाहाङ्मा राई